30-kii Deseembar 2018, Wakiilka qaramada midoobay ayaa warqad soo saaray. Ku socoto dowladda somalia, gaar ahaan wasaaradda arrimaha amniga. Dhaleeceyn iyo dhoocaar baa ku xusnaa. 12 Su'aalo taxan sidii imtixaan jaamacadeed baa ku sadareysnaa. F
30-kii Deseembar 2018, Wakiilka qaramada midoobay ayaa warqad soo saaray. Ku socoto dowladda somalia, gaar ahaan wasaaradda arrimaha amniga. Dhaleeceyn iyo dhoocaar baa ku xusnaa. 12 Su'aalo taxan sidii imtixaan jaamacadeed baa ku sadareysnaa. Fajac iyo amankaag bay igu noqotay. Waxaan is iri ma macalin baa arday su'aalo weydiinaya?. Ma madaxweynihii dalkaa? Mayee, waa madaxii qaramada midoobay ee Soomaaliya wakiilka uga ahaa. Gardarranaa oo garxumaa ninkaas!
In door haddii la joogay, akhbaar kalaa iisoo dhacday. Xaqiijinta warqadi bay aheyd, walaaci I hayay la iiga haatiyay. Ashqaraar bay ila aheyd. "Goormuu beer lafo yeeshay”, baan is iri. Maankayga waan ku hashiisiin waayay, in madax Soomaali ah inay mas’uul qaramada midoobe dalka ka masaafurin karaan, wallow madaxdan, madaxdi hore aheyn,haddana maladeedu meel fogbay joogtay.